Shil Siyaasadeed:Faallo Xiisa Badan Oo Ka Hadlay Siyaasiyiinta Kuraasta Somaliland Ka Daatay Iyo Xaalkooda Danbe W/Q: Cali Cabdi Coomay | Maalmahanews
Xukunkii uu doonayey hel, waa se maalin kale maantu, oo siday isu-qaban dhaqankiisii hore iyo kan uu soo galay? Mooyi, isagaa ka jawaabi.
Waa nin dantiisa wax walba ka hormariya, dantiisuna waa sideed xukun ku heshaa. Dhaqaalaha uu helo wuxuu u leexiyaa inuu xukun ku helo. Cadowgiisu waa ninka markasta dantiisa ka soo horjeesta. Saaxiibkiisa dhabta ahi waa kan mar kasta dantiisa u fuliya. Wax ceeba uma arko inuu raadiyo qofka ay isku danta yihiin. Wuxuu hadh iyo habeenba jecel yahay in ay tiisu mar kasta meelmarto. Marna raali kama aha inuu la saaxiibo qof ka caqli badan, ka aqoon badan, ka fikir wanaagsan, ka dood fiican……ka…ka… dadka ka soo horjeeda laba qaab ayuu ula dhaqmaa: ta koowaad, inuu shakhsiyaad maafiyo ah lacag siiyo, si ay cabsi iyo cago jugleyn ugu geystaan.
Ta labaad, dhaqaale buuran ayuu siiyaa, qacda hore oo uu ku soo xero geliyo, si uu uga xishoodo, oo aanay waxba ugu soo celin.
Waa tii hore loo yidhi” Af wax cunay xishoo”. Maaha laba wejiile waxa uu si cad u jidh diidaa qofka cadowgiisa ah, ma salaamo, magaciisa laguma soo hadal qaadi karo, wax xidhiidh ah oo toosan ama dadban lama yeesho. Mar kasta waxa fooda wejigiisa ku qoran inuu cadow la yahay qofkaasi. Haddii aad saaxiib la tahay, si fiican ayuu kuu soo dhaweyn, wuu ku salaami, ku koolkoolin, sheeko wanaagsan ayuu kula yeelan, danta aad leedahay iyo tau u leeyahay weydin ka wada hadli. Beenta ma yaqaan, hadalka inta cad ayuu ka yaqaan, xoriyad dhamaystiran ayuu haystaa, wixii uu diido isla goobta ayuu kaga fal-celiyaa Waxba dib uma dhigto, waxba ma xeeriyo, cidna uma habarado. Hadday bir ka adag tahay wadnaha ayuu hadalka ku jaraa.